Ma ciidan la’aan baa carruurta u geysay Al-Shabaab? - BBC News Somali
Ma ciidan la’aan baa carruurta u geysay Al-Shabaab?
15 Jannaayo 2018
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in kooxda Alshabaab ay si xoog ah ku uruursanayso carruuraha dadka dhalay ee deegaanada ay ka taliso kooxdan.
Balse Alshabaab kama aysan jawaabin eedeymaha loo jeediyay.
Hay'adda ayaa farta ku fiiqday deegaano ka mid ah Bay iyo Bakool sida Bardaale oo kale.
Waxaa jirta tuulo lagu magacaabo Buulo Fulay oo carruurta la'isu geeyo, halkaas oo lagu baro manhaj cusub oo waxbarasho oo Shabaabka soo rogeen, waxaa sidoo kale tuulada ka furan xerooyin ciidamo lagu tabobaro.
Carruurta la uruurinayo ayaa waxa ay da'doodu u dhaxaysaa 7 jir illaa 15 jir, iyada oo haddii ay waalidkood diidaan in ay dhiibaan ay la kulmayaan ciqaab adag.
Sheekh Mukhtaar Rooboow “Alshabaab waxaan ka baxay 5 sanno ka hor”
Warbixinta ayaa waxaa lagu saleeyay waraysiyo lala yeeshay odayaasha deegaanka, dad kasoo qaxay deegaanada oo soo galay xerooyinka barakacayaasha oo ay xitaa carruur ka midyihiin.
Waxa arrintan ay sidoo kale ka dhacday gobolada dhexe, halkaas oo la sheegay in carruur ka badan 300 guryahooda laga kaxaystay, lana geeyay goobo lagu tabobaro sida lagu xusay warbixinta kooxda Qaramada Midoobay ee dabogalka cunaqabataynta hubka Soomaaliya iyo Eritrea.
Arrimahan waxa ay inta badan dhacayeen sanadkii lasoo dhaafay dhexdiisa.
Mid ka mid ah macalimiinta iskuulaadka maxaliga ah oo meeshiisa loogu yimid , markii dambane soo cararay ayaa ka sheekeeyay wixii uu la kulmay "Fasalka ayay iigu yimaadeen, waxa ay rabeen 25 caruur ah oo da'doodu u dhaxayso 8 illaa 15 sano, ma aysan sheegin sababta ay u rabaan, kadib waa ay i garaaceen carruurta hortooda, carruurtii qaar ayaa ooyay, kadibna meesha ka cararay, wey soo qabteen, waana gaaraaceen carruurtii" ayuu yiri.
Haweenay kasoo qaxday degmada Buurhakaba waxa ay sheegtay in carruurteeda afarta ah ay arkeen 25 ka mid ah carruurihii iskuulka la dhiganayay oo la kaxaystay.
Waalidiinta qaarkood ayaa iska soo direy carruurtooda si ay u badbaadiyaan, waxayna imaadeen meelaha aysan Shabaabka ka talinin, halkaas oo qaarkood ay ehel la joogaan ama ay kaligood iska soo galeen xeryaha loo baro kacay.
Illaa 500 carruurahaas ah ayaa la sheegay in ay soo galeen magaalada Baydhabo oo kaliya.
Kooxda dabogalka cunaqabataynta Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in bishii June ee sanadkii hore, in Alshabaab ay xirtey illaa 45 oday oo ku noolaa magaalada Ceel Buur kadib markii sida la sheegay ay diideen in ay soo wareejiyaan carruur deegaankaas ku nool.
Human Rights Watch waxa ay sheegtay in ay caddaymo u heynin in carruuraha la afduubtay la geeyay goobo tabobar ciidan lagu siiyo, balse waxa ay sheegtay in dadkii la waraystay ay intooda badan muujiyeen walwalkaas.
Dowladda Soomaaliya ayay hay'adda sheegtay in ay qaaday talaabooyin lagu xaqiijinayo badbaada carruurta, waxaana ka mid ah in ay saxiixday qaraarka caalamiga ah ee difaaca xuquuqda carruurta, inkasta oo sharcigaas uusan wali baarlamaanka meelmarinin.
Sharcigan ayaa waxa uu mamnuucayaa in carruuta la askareysto, iyo in laga hor istaago waxbarashada ama lagu shaqaysto.
Lama oga sababta ay Alshabaab carruurta u uruursanayso, waxaase muddooyinkii dhawaa soo baxayay warar sheegaya in Alshabaab ay u baahantahay ciidammo dheeraad ah kadib markii laga saaray deegaano badan.
Maxay salka ku haysaa amni xumada soo rogaalcelisay ee Soomaaliya?
13 Sebtembar 2017
Diidmada Shilin Soomaaliga ee Boosaaso oo xal laga gaaray